प्रेमीकाका लागि आमाबुवा र धर्म समेत छोडेका थिए यि चितवनका यि प्रेमिले तर… – Gazabkonews
प्रेमीकाका लागि आमाबुवा र धर्म समेत छोडेका थिए यि चितवनका यि प्रेमिले तर…
काठमाडौ । चितवनमा भएको एउटा घटनाले अहिले सबैको ध्यान तानेको छ । सानै उमेरमा प्रेममा परेका जोडीको वियोगान्त अवस्थाले युवक जिवनको दोसाँधमा छन् भने एउटै गाउँका दुई परिवारबीच दुस्मनीको अवस्था आएको छ । १७ वर्षकी युवती र २१ वर्षका युवक एक अर्कालाई प्रेम गर्थे । उनीहरुले विवाह पनि गरे । तर परिवारले उनीहरुको विवाह स्वीकार गर्न नसकेका कारण युवतीले आफ्नो वयान फेरीन् ।
युवकसंग चितवन देखि काठमाडौं पुगेर युवकको आमाको अगाडी विवाह गरेकी युवती अर्को दिन माइत फर्किए पछि मलाई दवावमा पारेर विवाह गरियो भने पछि युवकले सहन सकेनन् । भिडियोमा आएका युवक र युवतीबीचको म्यासेन्जरमा भएका कुराकानीका आधारमा परिवारको दवावमा आएर युवतीले वयान फेरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
युवतीकै लागि आमाबुवा, संस्कार र धर्म समेत छोडेका युवकले युवतीको बदलिएको ब्यवहार सहन नसकेर वि ष से व न गरेका छन् । उनी अस्पतालमा उपचारार्थ छन् । घटना भएको चार दिन सम्म पनि उनको होस आएको छैन । युवतीको प्रेममा परेका २१ वर्षका युवक कञ्चनले युवतीकै धर्म अंगाले । उनी क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन गरेका कारणा धार्मीक कलेज समेत छोडेका थिए । ।
युवतीकै लागि परिवारलाई पनि कन्भिन्स गरेका थिए । मेरो खुसी नै अनिशा हो त्यसैले मेरो प्रेम स्वीकार गर्नु भन्दै आमालाई उनले सम्झाएका थिए । त्यसैले छोराको लागि आमाले सबैकुरा स्वीकार गरिन् तर अहिले उही युवतीका कारण छोरा जिवनसंग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
भिडियो हेर्दा पनि फिल्मको कथा जस्तो लाग्ने वास्तविक घटनाको रोचक कुरा त के छ भने आफु त्यस्तो अवस्थामा पुगेका ति कञ्चनले यो सबै घटनाको कारण आफ्नो प्रेमिकालाई नबनाउनु भन्दै पत्र लेखेका छन् । बरु म उसको लागि प्रा ण दिन सक्छु तर अनिशालाई केही नभन्नु भन्दै छोराले लेखेको पत्र देखाउँदै आमाले बलिन्द्र धारा आँशु बगाएकी छन् ।
संसद विघटनपछि पार्टी चिरा चिरा परेका बेला ओली र प्रचण्डको एउटै मञ्चमा जम्काभेट, भयो यस्तो हंगामा
संसद विघटनपछि पार्टी चिरा परेका बेला ओली र प्रचण्डको एउटै मञ्चमा जम्काभेट, भयो यस्तो हंगामा, केपी ओलीले गाए अञ्जुको तिम्ले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र रु तिम्रो मेरो बिचको नाता भन्नु पनि के रह्यो र ? प्रचण्डले पनि ओलीकै शैलीमा भने बालुवाटारमा बिच्केको बिरोलो शितल निवास पुगेर खाँबो कोतर्यो, हेर्नुहोस् ओली र प्रचण्ड एउटै मञ्चमा जम्काभेट भएपछिको भनाभनको यो भिडियो, बोल्दा बोल्दै चिप्लिएका ओलीले प्रचण्डलाई बोका भने, हेर्नुहोस् भिडियो
पूर्व पतिका साथमा देखिइन् लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्त, एकसाथ बसेर गरे यस्ता मिठा कुरा, डिर्भोसपछि यति हाँसेर यि दुई पहिलो पटक बोलको यो एक्सक्लुसिभ भिडियो हेर्नुहोस्, छोरी परितोषिकाका विषयमा यि दुईले गरे यस्तो निर्णय
पार्टी फुटे पछि ओली र प्रचण्ड जम्काभेट, भयो यस्तो हंगामा
घुम्ने होइन त पञ्चकोट ?
‘नवलपुर–ढोरपाटन’ प्रवद्र्धनात्मक भ्रमणमा निस्केको नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको टोली शनिबार मध्याह्न पख सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट पुग्यो । टोलीका सदस्यमध्ये अधिकांशले पहिलोचोटि पञ्चकोटमा पाइला राख्दै थिए ।
महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका सदस्य एवं गोरखाका पत्रकार राजेन्द्र न्यौपानेले पहिलो नजरमै पञ्चकोटले रोमाञ्चित तुल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “बागलुङ घुम्न आउँदा छुटाउनै नहुने ठाउँ रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो । न्यौपाने मात्र होइन, भ्रमण टोलीका सबै सदस्य त्यहाँको सौन्दर्यले मोहित बने । मज्जाले घुमफिर गरे । रमाए ।
पुसको घमाइलो दिन । दन्ते लहरझैँ खुलेका हिमाल । मनोहर भू–बनोट । तलपट्टि तोरी फुलेर पहेँलै बनेका खेतबारी, रङ्गीचङ्गी घर । उस्तै आकर्षक मन्दिर र मूर्ति । जो कोहीको मन लोभिइहाल्छ, पञ्चकोट पुग्दा । शनिबारको फुर्सदले होला अन्य दिनको तुलनामा आगन्तुकको चहलपहल बढी थियो ।
कोही मन्दिरमा पूजापाठमा व्यस्त देखिन्थे । कोही सिसमहलमा रमाइरहेका भेटिन्थे त कसैलाई तस्बीर खिच्दैमा भ्याइनभ्याइ थियो । कोभिड–१९ पछिको बन्दाबन्दी खुलेर स्थिति केही सहज बनेपछि पञ्चकोटमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको हो ।
बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित पञ्चकोट धार्मिक र प्रकृतिप्रेमी पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छ । मठमन्दिरको दर्शन र मनोरम प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि पर्यटक त्यहाँ पुग्नेछन् । देशका विभिन्न भागबाट धर्मावलम्बीसहित पर्यटक आउने गरेको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटका कार्यालय सचिव रामबहादुर क्षत्रीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पुस लागेयता पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । “शनिबार र बिदाका दिनमा भीड नै लाग्छ, अघिपछि पनि दैनिक दुई÷तीन सय घुम्न आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो । टिकट काटेर सिसमहल घुम्ने पर्यटकको भने दैनिक रुपमै आँकडा भेटिन्छ । शनिबार दुई सयभन्दा बढीले रु ५० को टिकटमा सिसमहल घुमेका थिए ।
पञ्चकोट घुम्नेमध्ये झण्डै १० प्रतिशत मात्रै सिसमहल छिर्छन् । विद्यालय, सहकारीलगायत विभिन्न संस्थाबाट समेत भ्रमण टोली पञ्चकोट आउने गरेको छ । पञ्चकोट निर्माणाधीन विश्वकै अग्लो १३५ फिटको विश्व शान्ति कलश र पाँच हजार ५५५ किलोको मुक्तिनाथ महाघण्टका कारण पनि चर्चामा छ । अहिले कलश र महाघण्ट राख्नका लागि संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ ।
कलश निर्माणमा मात्रै रु ३२ करोड लागत लाग्ने जनाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विसं २०७१ मा उक्त कलशको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । आर्थिक स्रोत जुटेमा आउँदो तीन वर्षभित्रमा कलश निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटका अध्यक्ष ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताउनुभयो ।
हालसम्म पञ्चकोटमा रु २५ करोडभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । धार्मिक तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित छ वर्षदेखि पञ्चकोटका संरचना बनाउन शुरु गरिएको थियो । सम्पदा निर्माणले पूर्णता नपाउँदै पञ्चकोट पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । पञ्चकोटमा आन्तरिक मात्र नभएर भारतलगायतका देशबाट पनि फाटफुटरुपमा पर्यटक आउँछन् ।
भक्तालु र पर्यटक बढेपछि स्थानीयवासी व्यवसायतिर जोडिन थालेका छन् । होटेल, रेष्टुराँ र पसल थपिँदै छन् । पर्यटनमैत्री हिसाबले संरचना बनाउनतिर गाउँले कस्सिएका छन् । पञ्चकोटको समग्र विकासका लागि गुरुयोजनामार्फत काम भइरहेको अध्यक्ष प्रपन्नाचार्यले बताउनुभयो । “देशकै प्रसिद्ध धार्मिक सम्पदास्थलका रुपमा चिनाउने गरी काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्वकै अग्लो कलश बनेपछि यो संसारभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र बन्नेछ ।”
पञ्चकोटमा हाल गणेश, गण्डकी माताको मन्दिर, हनुमानको मूर्ति, गरुड–शिला, सत्ससङ्ग भवन, अतिथि आवास, कन्या गुरुकुल, सिसमहल, पदमार्गलगायत संरचना बनिसकेका छन् । दक्षिण भारतीय शैलीका कलात्मक मठमन्दिरले पञ्चकोटको आकर्षण बढाएका छन् । सर्वसिद्धिधामले पूर्णता पाउँदासम्म झण्डै रु दुई अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । एक सय ७५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पञ्चकोटमा स्वामी कमलनयनाचार्य ९मुक्तिनाथ बाबा० संस्थापक रहेको अखण्ड ज्योतिबाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्टमार्फत संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट निर्माणको सङ्कल्प र पहल पनि स्वामी कमलनयनाचार्यले नै लिनुभएको हो ।
पञ्चकोटको विकाससँगै मुक्तिनाथ क्षेत्र, शालिग्राम, पवित्र कालीगण्डकी नदी तथा यससँग जोडिएका धर्म, संस्कृति र सभ्यताहरुको पनि संरक्षण हुने विश्वास लिइएको छ । पर्यटकीय गतिविधिमार्फत जिल्लाको आर्थिक विकासमा पनि पञ्चकोट कोशेढुङ्गा बन्ने देखिएको छ । बागलुङ पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष राजु खड्काले पञ्चकोटमा पर्यटकीय पूर्वाधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
स्तरीय होटेल, रेष्टुराँसहित पर्यटनमैत्री खालका सेवा सुविधा विस्तार गर्दै जानु पर्ने उहाँको भनाइ छ । “यातायातको सेवा र पहुँचलाई थप सहज बनाउन आवश्यक छ”, अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो, “धार्मिक मात्र नभएर अन्य पर्यटकका लागि पनि पञ्चकोट आकर्षक गन्तव्यस्थल हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
पञ्चकोटसँगै नजीकको कालिका भगवती मन्दिर, कुँडुलेको शालिग्राम सङ्ग्रहालय, भैरवस्थान, गाजाको दह, भकुण्डेलगायतका पर्यटकीय स्थललाई जोडेर एकीकृत पर्यटन विकासको योजना ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । छिट्टै कालिका भगवती मन्दिरदेखि पञ्चकोटसम्म सहुलियत दरमा यातायात सेवा दिने समितिको योजना छ । बागलुङ बजारदेखि आठ किमिको दूरीमा अवस्थित पञ्चकोट मोटरमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । पदयात्रा रुचाउनेका लागि पनि बाटो सहज छ । पञ्चकोट नेपालका १०१ गन्तव्यमध्येमा सूचीकृत छ । बागलुङलाई गन्तव्य बनाएर आउने पर्यटकले पञ्चकोटसहित आसपासका गन्तव्यय स्थल घुम्न सक्छन् ।